Indlu ye-attic enembono yentaba (amagumbi okulala ama-3 / 6pax)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguBharat Singh
Iza kusetyenziswa nguwe wedwa le ndawo.
Lo ngumgangatho wesithathu wendlu enamagumbi amabini okulala anamagumbi okuhlamba abucala, indawo ekwiattic enegumbi lokulala labucala, i-terrace ephezu kophahla, kunye nebalcony enkulu enikezela ngeyona mbono ilungileyo yeentaba / ilali.
Ukutya kunokuodolwa kwiindawo zethu zokutyela ukusuka ngo-9am ukuya ku-10pm. Ukutya akubandakanywa kwiindleko.
Sibonelela nge-wifi elungileyo (~ 70Mbps), i-smart TV, itafile ye-WFH, kunye neendawo zokupaka zangaphakathi ukuze uhlale uxhumekile.
Indlu ye-attic yisakhiwo esinemigangatho emithathu kunye ne-attic kumgangatho ophezulu odibeneyo kwi-terrace. Amagumbi ane-balcony engasemva enika umbono weentaba kunye nelali yaseNaddi. Ipaseji yecala elingaphambili yindlela enkulu kaNaddi ejonge kuyo. Indawo yokupaka yangaphakathi iyafumaneka kumgangatho ongaphantsi. Indawo yokutyela / iCafe kumgangatho wokuqala.
Igaraji yendlu yokupaka simahla eseyadini – ineendawo eziyi-4
32" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
Ifriji yeCommon refrigerator on ground floor
4.90 · Izimvo eziyi-20
Ukuphuma kwelanga kunye nokutshona kwelanga kwi-balcony kunye ne-terrace yinto ekufuneka uyibone. Le ndawo iqhagamshelwe kakuhle kwiindawo zokhenketho ezikufutshane. Sihlala sithumela amabali kunye neembalasane zeendawo ezikufutshane ukuba sizindwendwele kwiakhawunti yethu ye-insta
Umbuki zindwendwe ngu- Bharat Singh
Ujoyine nge- 2021 Matshi
UBharat Singh yi-Superhost